Iowa waxay bilawday raadinta dhimashada COVID-19 ee dadka laga helay viruska laakiin aan la baarin | KWIT
Iowa waxay bilawday raadinta dhimashada COVID-19 ee dadka laga helay viruska laakiin aan la baarin
By Halima Osman • Dec 8, 2020
Somali News 12.08.2020
Iowa waxay bilawday raadinta dhimashada COVID-19 ee dadka laga helay viruska laakiin aan la baarin, isbedelka ayaa boqolaal dhimasho oo dheeri ah ugu dari kara tirinta gobolka.
Iowa hadda waxay aqbashaa baaritaanka caafimaad ee dhakhaatiirta ee ma ahan kaliya baaritaanka fayraska ee saxda ah markii loo aaneynayo dhimashada coronavirus.
Isbedelku wuxuu meesha ka saaray dhimashada 433 ee nidaamka laakiin wuxuu ku daray 610, taasoo bixineysa faa iidada bilowga ah ee dhimashada 177 waxayna sare u qaadday tirada gobolka in ka badan 2,900. Qaar ka mid ah kiisaska laga saaray ayaa dib loogu dari karaa gudaha.
Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu diiwaangaliyay geeri dheeri ah maanta Degmada Woodbury, 142 oo dhan. Si kastaba ha noqotee, nidaamka warbixinta cusub wuxuu muujinayaa 126. Si kastaba ha noqotee, tiradaas ayaa la filayaa inay isbadasho. Waxaa jiray 55 kiis oo dheeri ah 11,069 oo dhan.
Tirada dhimashada COVID-19 ee la xiriirta South Dakota waa 1,111 kadib markii lagu daray hal dhimasho oo dheeraad ah maalintii la soo dhaafay cudurka. Tirada dadka isbitaalka la dhigey South Dakota waxay hoos ugu dhacday heerka ugu hooseeya tan iyo 5-tii Nofeembar.
Tirooyinkii ugu dambeeyay ee fayraska ee Nebraska ayaa muujinaya xoogaa horumar ah laakiin saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya in kiisaska fayraska wali ay sarreeyaan welina ma cadda sida kulammada Thanksgiving iyo safarku ay u saameyn doonaan tirooyinka.
Koox ka socota Nebraska oo isku dayay inay ku guuleystaan ​​soo-jeedinta marijuana ee codbixinta bisha Nofeembar waxay bilaabi doonaan olole cusub oo 2022 ah oo lagu sharciyeeynayo daroogada isticmaalka madadaalada.
Abaabulayaasha leh Nebraskans ee loogu talagalay Caafimaadka Marijuana waxay yiraahdaan waxay qorsheynayaan wado cusub oo ballaaran oo codsi ah. Kooxdu waxay uruurisay in ka badan saxiixyo ku filan si ay ugu qalanto qiyaasta marijuana ee codbixinta sannadkan, laakiin Maxkamadda Sare ee Nebraska ayaa amartay in meesha laga saaro ka dib markii koox xiriir la leh dhaqdhaqaaqayaasha Jamhuuriga ay ku xujeeyeen maxkamadda. In kasta oo ay ka soo horjeedaan muxaafid caan ah, oo uu ka mid yahay Gov. Pete Ricketts, qiyaasta waxay lahaan lahayd fursad wanaagsan oo ay ku dhaafto Nebraska.